Raha manana Apple TV 4 ianao dia tsy maintsy mividy tariby USB-C | Vaovao IPhone
Raha nividy Apple TV 4 ianao dia tsy maintsy mividy tariby USB-C
Indraindray i Apple dia manao hetsika vitsivitsy izay tsy azontsika tsara. Ny farany dia mifandraika amin'ny boaty napetraka-top vaovao ary izany dia, araka ny hitanao amin'ny sary etsy ambonin'ireto tsipika ireto, ny Apple TV andiany faha-XNUMX misy a Seranan-tsambo USB-C. Tsy hafahafa mihitsy izany, ny mifanohitra amin'izay no izy. USB-C no ho seranana mahazatra atsy ho atsy ary tsy tokony hahagaga raha misy fitaovana fandefasana azy io ankehitriny. Ny tsy takatra dia rehefa manao unboxing isika tsy mahita tariby USB-C izahay na adapter rehetra. Nahita tariby tselatra iray ihany izahay fa, rehefa avy nieritreritra nandritra ny fotoana kelikely, dia eo no hamidy ny Siri Remote.
Ny seranan-tsambo USB-C an'ny Apple TV 4 dia mety ho eo nefa tsy ampiasaina hatramin'ny fotoana nividianantsika ilay fitaovana mandra-panavaozantsika azy. Saingy tsy azo inoana izany. tvOS dia rafitra fiasa ary, toa ny rafitra miasa rehetra, angamba te-hamerina amin'ny laoniny amin'ny iTunes isika amin'ny ho avy ary io dia rehefa tojo ny olana isika: tsy maintsy mividiana tariby USB-C hampifandray ny Apple TV amin'ny solosainao.
Saingy tsy ilaina ny tariby USB-C fotsiny hampifandraisana ny ATV4 amin'ny iTunes. Ilaintsika koa ny mampiasa ny seranana vaovao hanaovana pikantsary na horonantsary firaketana, zavatra izay tena ilaina indrindra amin'ny fandraisam-peo Gameplays. Ny fampiharana dia toa hiseho amin'ny filalaovana horonantsary, toy ny VLC, ary hahafahantsika mamindra ny sarimihetsika amin'ny ATV4 dia mila ny tariby USB-C isika, farafaharatsiny mba voalohany nilazana azy hifandray amin'ny alàlan'ny Wi-Fi (na dia ity aza aho tsy mahalala, fa mety miaraka amin'ny iPhone).
Ao amin'ny Apple Store an-tserasera misy a Tariby USB-C amin'ny € 19,95, fa amin'ny Amazon dia manana izahay iray ho an'ny € 8,99, tariby izay efa nangatahiko. Raha mikasa ny hamerina amin'ny laoniny ianao, hisambotra na hamindra rakitra amin'ny Apple TV an'ny taranaka fahefatra vaovao dia tsy maintsy mividy ilay tariby izay "hadinon'i Apple" ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple tv » Raha nividy Apple TV 4 ianao dia tsy maintsy mividy tariby USB-C
Eny, efa afaka nitondra tariby niaraka tamin'ny fividianana ianao, izay misy antsipiriany kely kokoa noho ny dashboard an'ny Seza Panda hoy aho!
Eny, ny marina dia raha azon'izy ireo nampidirina izany noho io vidiny io, dia nieritreritra ny hahazo ilay 64gb amin'izay mety hitranga amin'ny fahaiza-manao aho ary na dia manana ny TV3 aza aho dia tsy hitako afa-tsy ny tsy fitoviana amin'ny app store izay kely fotsiny izao mahantra nefa vetivety dia hiroso amin'ny fivezivezena ny mpamorona, atahorako sao mba handalo ny fizaram-bola indray raha te hanana ny fampiharana tadiavintsika indray.
Salama jimmy. Ny fampiharana novidiana dia ho ao amin'ny tvOS raha tianao ny developer. Manana Geometry Wars 3 ao amin'ny Apple TV aho satria nividy azy tamin'ny iPhone, ohatra. Tsy maintsy ataon'izy ireo ho universal fotsiny izy ireo.
tanim-boaloboka dia hoy izy:
Ary ireo kapila mafy tonga tsy misy tariby sata ?. Ary ireo mpanara-maso tonga tsy misy tariby HDMI ?. Tongasoa eto amin'ny tontolo tena izy. Oh, ary ny hendry dia ray aman-dreny! Miala tsiny fa nisy olona nilaza taminao.
Valiny tamin'i Viña
Luis chacon dia hoy izy:
Misaotra anao, nahasoa ahy io
Mamaly an'i luis chacon
Deelar dia hoy izy:
Ny tombony ho anao dia ny mandeha mianatra.
Valiny tamin'i Deelar
arquiazua dia hoy izy:
Ilay tsy "poizina" ho anao dia mpampianatra ny tsipelinao!
Mamaly an'i arquiazua
Tsy ratsy ho anao ny mijery ny zavatra nosoratanao koa.
Fampiharana 10 hankafizanao ny Apple TV vaovao